Home Wararka Xaalada Guriceel oo degan, Al Sunna oo kulamo la qaadatay hooganka...
Xaalada Guriceel oo degan, Al Sunna oo kulamo la qaadatay hooganka Guriceel
Wararka naga soo gaarayo Guriceel ayaa sheegaya in deegaanka Guriceel uu maanta degan yahay iyada oo ay maamulkiisa gacanta ugu jirto Al Sunna Wajameeca. Ciidanka Ahlusunna Waljameeca ayaa goordhaweyd la wareegay deegaan hoostega Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Maamulka Galmudug, kadib markii ay halkaas isaga baxeen Ciidankii Galmudug ee horey u joogay.
Madaxda ururka Al Sunna ayaa kulamo kala duwan la qaatay madaxda kala duwan ee deeganka ka soo jeeda. Ciidanka Daacad u ah Al Sunna ayaa la wareegay gacan ku heynta deegaanka Ceeldheere oo Dhuusamareeb u jira qiyaastii 30 KM, isla markaana waxaa halkaas isaga baxay Ciidamadii Galmudug ee joogay oo u dhaqaaqay dhanka Caasimadda Maamulka.
War kasoo baxay Taliska ciidanka Ahlu Sunna Waljameeca gaar ahaan Cali Faarax Maxamed oo hoggaaminayo ciidanka Guraceel ku sugan ayaa waxaa lagu sheegay ineysan garoonka diyaaradaha Guriceel kasoo dagi karin diyaarad sida hub iyo ciidan oo ay mamnuuc tahay.
Taliye Cali ayaa shacabka ku dhaqanka Guraceel ugu baaqay iney is dajiyaan islamarkaana wax qalqal ah aysan isgalin, isagoo shacabka u sheegay in ciidanka ay yihiin kuwii Ahlusunna Waljameeca oo u shaqeyn jiray.
Waxaa saakay degan xaalada degmada Guraceel ee Gobolka Galgaduud, waxaana ku sugan Ciidamo ka tirsan Ahlusunna, inkastoo Shacabka ku dhaqan degmadaasi ay qabaan casbi ah in uu dagaal xooggan halkaa ka qarxo, maadama ciidamo badan oo kuwa dowlada oo hubeysan ay wadaan is aruursi islamarkaana ay ku sugan yihiin deegaano hoos yimaada degmada Guraceel.